Q & A – စာမကျြနှာ2– Healthy Life Journal
—–၊ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. ပိန်လွန်းတဲ့အတွက် ပြည့်ချင်ပါတယ်။ အစားအသောက်ကိုလည်း အများကြီးစားပါတယ်။ ဘယ်လောက်စာစား ၀မလာဘူး။ အဲဒါ ဘယ်လိုလုပ်သင့်ပါသလဲရှင်။ A. တချို့လူတွေက အရမ်းပိန်တယ်။ ဘယ်လောက်စာစား မ၀ဘူး။ အဲဒီလိုလူတွေကို အဓိကအချက်နှစ်ချက်...
—၊ ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊— Q. ဆီးချိုသမားတွေမှာ ခြေထောက်အနာဖြစ်တာ၊ ခြေထောက်ဖြတ်ရတာတို့ကို မကြာခဏ ကြားသိနေရပါတယ်။ အဲဒါလေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိချင်ပါတယ် ဆရာ။ A. ဆီးချိုသမားတွေရဲ့  နောက်ဆက်တွဲဖြစ်တတ်တဲ့ ဝေဒနာတွေထဲမှာ...
ထမင်းမစားတဲ့ကလေး ပိန်လွန်းလို့ ဘယ်လိုကျွေးရမလဲ . . .
—–၊ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. ကျွန်မကလေးက အသက် ၄ နှစ်ပါ။ ပိန်လွန်းလို့ ဘယ်လိုကျွေးသင့်ပါသလဲ။ ထမင်းမစားချင်ဘူး။ သရေစာပဲ စားပါတယ်။ A. ကလေးအသက် (၄) နှစ်ဆိုရင် ကိုယ်အလေးချိန်က ပေါင်...
အာဟာရပြည့်မီဖို့ အရေးကြီးသလား …
—–၊ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. ဒီနေ့ခေတ်မှာ ကလေးကအစ အသက်ကြီးတဲ့အရွယ်အထိ အာဟာရပြည့်ဖို့ အရေးကြီးတယ်ဆိုပြီး လူပြောများလာကြပါတယ်။ ဘာကြောင့်ပါလဲ။ A. အာဟာရပြည့်မီဖို့ လူတိုင်းအတွက် အရေးကြီးပါတယ်။ အာဟာရက လူတစ်ယောက်ရဲ့  ကာယစွမ်းရည်ရော...
—–၊ ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊—– Q. မျက်စိမြင်ကွင်း တစ်နေရာတည်းမှာ ကွက်ပြီး မမြင်ရတာက ဘာကြောင့် ဖြစ်တတ်ပါသလဲ ဆရာ။ A. မျက်စိမြင်ကွင်း (Field of Vision) မှာ တစ်နေရာတည်းကွက်ပြီး ကောင်းကောင်းမမြင်တာကို...
—–၊ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ၊—– အခုနောက်ပိုင်းမှာ ကလေးတွေကို အသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ အချိုရည်၊ Instant ဖော်မြူလာနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ အစားအသောက်တွေ၊ အဆင်သင့်အစာ (Junk Food) တွေကို ကျွေးလာကြတာကို တွေ့ရတာကြောင့် ဒါတွေက ကလေးအသက် ၅...
လသားကလေး ခြေထောက်မပြင်ရင် ခွင်မယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါသလား
———၊ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၊——— Q.လသားကလေးတွေနဲ့ ပတ်သတ်လို့ တချို့အယူအဆတွေကြားနေရတာ မှန်-မမှန် သေချာမသိရတာမို့ မေးပါရစေရှင့်။ ကျွန်မကလေးက ခုဆို ၂ လနဲ့ ၉ ရက်သားပါရှင်။ ခြေထောင်ကိုပြင်ခိုင်းကြပါတယ်။ မပြင်ရင် ခွင်မယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ ဟုတ်၊ မဟုတ် ဖြေပေးပါရှင်။ ကလေးခြေထောက်ကို...
နို့တိုက်မိခင်စားတဲ့ အစာက ကလေးအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသလား
——–၊ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၊——— Q. ဆရာခင်ဗျာ။ မိခင်စားသော အစားအစာမှ နို့စို့နေသော ကလေးငယ်ကို Effect ဖြစ်စေပါသလား ဆရာ။ ဥပမာ- မိခင်က မျှစ်-မျှစ်ချဉ်၊ ကြက်ဟင်းခါးသီး၊ ဒညင်းသီးစားလို့ ကလေးကို နေမကောင်းတာ တစ်ခုခုဖြစ်စေတာမျိုး၊ အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေတာမျိုး။ မိခင်က...